Almost your post useful for me. Thanksalot for your share.
တပြားမှကို လုံးဝ၊ လုံးဝ မပေးရပါဘူးနော်..။
အသုံးတည့်တယ်လို့ သိရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ဆက်ကြိုးစားပါဦးမယ်ဗျာ..
>>sin dan lar
တပြားမှကို မပေးရပါဘူး မမဆင်ဆင်ရယ်... :)
Thank you so much par.... You are so kind... :)
AVG 8.5 anti-virus Free Version ကိုဒေါင်းလုဒ် လုပ်ရတာမဟုတ်ပါ။
AVG 8.5 anti-virus (paid) Trial version ကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ပြီးမှ
Activation လုပ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုလူအေး မအားလို့ ကိုယ်စားပဲ ပြင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Thank you so much for your kind help.. Appreciate your help..
Also visit my web site; www.penpalspoint.com
I found your weblog website on google and examine justafew
My web blog - http://www.szakibazis.com/blogs/entry/Tips-In-Getting-The-Best-Deals-Of-Hotels-In-2013-05-08-6